Anyị nwere ike hazie akwa dị iche iche dị iche iche, akwa ọcha, akwa na akwa ndị e biri ebi nke enwere ike iji maka akpa, akpa, uwe elu, uwe, akpụkpọ ụkwụ, akpa, akpa na akwa ụlọ, wee gbasaa. Anyị nwekwara ike ịmechaa akwa a site na iji sanding (peach skin). Ihe aka-mmiri, ihe gha aru-ugha, oku na-acha oku, oria na-egbu egbu, ihe mgbapu.
Iji zụlite ihe ọhụụ na azụmaahịa na-aga n’ihu dị ka ihe mkpali, ime ka azụmaahịa siri ike, arụ ọrụ nke isi, njikwa ọtụtụ na iwusi ike dịka isi akara, ya na akụ na ụba carbon dị ala, nchebe gburugburu ebe obibi na njikarịcha njikwa dị ka nduzi, na-eme akwa textile siri ike. ibi akwụkwọ na nhicha nke isi ụlọ ọrụ.
Ruimian nwere akụrụngwa emepụtara emepe emepe na mba ofesi; a na-ebuga ngwaahịa ndị ọzọ na United States, Japan, Western Europe, South Korea, Australia, Hong Kong, Turkey na obodo na mpaghara ndị ọzọ.
Ejiri akwa akwa akwa T / C 65/35
Ezigbo polyester na-eji akwa akwa akwa pollin
20% akwa 80% polyester baging akwa
10% akwa 90% uwe ojii polyester
35% owu 65% polyester Hospital edo
Hebei Ruimian Co., Ltd. bụ ọkachamara emeputa na onye na-ebubata akwa. Anyị nwere ike hazie akwa dị iche iche dị iche iche, akwa ọcha, akwa na akwa ndị e biri ebi nke enwere ike iji maka akpa, akpa, uwe elu, uwe, akpụkpọ ụkwụ, akpa, akpa na akwa ụlọ, wee gbasaa. Anyị nwekwara ike ịmechaa akwa a site na iji sanding (peach skin). Ihe aka-mmiri, ihe gha aru-ugha, oku na-acha oku, oria na-egbu egbu, ihe mgbapu.
35% akwa 65% polyester pocketing akwa
35% akwa 65% polyester uwe elu uwe, ndị a na-ewu ewu ...
20% akwa 80% uwe ojii polyester, ndị a na-eji ejiji ...